Inya Book Club
ကျောက်တံတား အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်
ငွေ ၅၀၀၀ သုံးပြီး စာအုပ် ၂အုပ်လောက် ၀ယ်ဖတ်မလား ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ် ၁၅အုပ်လောက် ငှားဖတ်မလား ????????
Inya Book Club မှာ စာအုပ်ငှားမယ်ဆိုရင် -
ကတ် (၃) မျိုးရှိပါတယ်၊ ကတ်တွေက စာအုပ်ငှားရုံတင်မကဘဲ ဘာလက်ဆောင်တွေ ထည့်ပေးထားလဲဆိုတော့ …
အင်းလျားစံပယ် အပြာကတ် ????
အပြာကတ်မှာဆိုရင် အကွက် (၁၅) ကွက် ပါပြီး တစ်ကွက်ကို တစ်အုပ်နှုန်းနဲ့ တစ်ခါငှား သုံးအုပ်အထိ ငှားလို့ရပါတယ် အချိန်ကတော့ အများဆုံး တစ်ပတ်ပါ ၁၅အုပ်ငှားလို့ရတဲ့ ၅၀၀၀ တန်ကတ်မှာ ဆိုရင် ကော်ဖီ လက်ဆောင် လည်း နှစ်ခွက်ပါဦးမှာပါ
အင်းလျားစံပယ် အဝါကတ် ????
အဝါကတ်ကတော့ အကွက်(၃၀) ပါ အဝါကတ်လည်း တစ်ကွက်က်ို တစ်အုပ်နှုန်းနဲ့ တစ်ခါငှား သုံးအုပ်ထိ ငှားလို့ရပါတယ် သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ကတ်က အကွက်ပြည့်ငှားပြီးတိုင်း စာအုပ်တစ်အုပ် လက်ဆောင်ရနိုင်တာပါ ပြီးတော့ သူက ပိုသက်သာတယ်လေ အကွက် ၃၀ ကိုမှ ၈၀၀၀ တည်းရယ်
အင်းလျားစံပယ် ကျောင်းသားကတ် ????????
ဒီကတ်လေးကတော့ ကလေးတွေကနေပြီး အထက်တန်းကျောင်းသားတွေအထိ ရည်ရွယ်ထားတာပါ သူက အကွက် (၃၀) ပါတာကိုမှ ၅၀၀၀ တည်းဆိုတော့ ကျောင်းသားတွေအတွက် မုန့်ဖိုးလေးနဲ့စာအုပ်တွေအများကြီး ငှားဖတ်လို့ အဆင်ပြေတာပေါ့ ကျောင်းသားကတ်လုပ်တဲ့အခါ ကျောင်းသားကတ်လေးတော့ ပြပေးဖို့လိုမယ်နော်
#InyaBookClub #Book #Rental #Service
ဆိုင်က ဘားလမ်းနဲ့ အနော်ရထာလမ်းထောင့် (အလယ်ဘလောက်) မှာပါ အောက်မှာ ရွှေမြို့တော်နဲ့ Mi ဖုန်းဆိုင်ရှိပါတယ်
Contact - 09408264826